1. Uru na ọghọm dị na mmiri gwakọtara ngwa agha Wet agwakọta ngwa agha bụ njikere mbuaha ngwa agha na tụrụ na mixes akụrụngwa dị ka ciment, ezi mkpokọta, ịnweta admixtures, admixtures, mgbakwunye, pigments na mmiri na a ụfọdụ nkezi na ịgwakọta osisi, na wee bufee ha na...
Ngwa ngwa gypsum bụ ụdị mgbidi dị n'ime ụlọ na ihe nkedo ụlọ nke nwere nchebe gburugburu ebe obibi ndụ ndụ, arụmọrụ dị elu, nchekwa ike na ihe owuwu dị mma. Ọ nwere uru nke ịdị arọ dị arọ, ike dị elu, mgbochi ọkụ, ụda ụda, ọ dịghị nkwụsịtụ, ọ dịghị cracking, thermal insula ...
1. Building waterproofing: ◆ eriri ngwa agha ike n'ụzọ dị irè mebere maka teknuzu arụmọrụ ntụpọ nke ọhụrụ ngwa na mmepe nke oge a engineering teknụzụ dị ka structural onwe waterproofing na ụlọ engineering. 2. Joint sealant: ◆ ezigbo njide mmiri, nke nwere ike ...
Onye nnọchi anya China ndị ahịa Egypt gara leta ụlọ ọrụ anyị wee nye iwu ka otu setịpụ 60T / H zuru ngwa ngwa ngwa ngwa
Gris ahịa nyere iwu 3 tent 15-20T/H zuru akpaka akọrọ ngwa agha osisi. Onye ahịa nwere ahụmịhe afọ 5 na mpaghara ngwa agha akọrọ, ọ maara teknụzụ igwe na kemịkalụ nke ọma. Mgbe afọ abụọ na-ekwurịta okwu na anyị ma họrọ soplaya, n'ikpeazụ Gris ahịa kpebiri c ...
Gris ahịa nyere iwu 3 tent 15-20T/H zuru akpaka akọrọ ngwa agha osisi
Na 2021,6, 25, MG kacha ọhụrụ echichi 50T/H zuru akpaka akọrọ ngwa agha ngwa agha 30T/H ájá nkụ arụnyere na Ordos, Inner Mongolia.
Na 2021,6, 25, MG kacha ọhụrụ echichi 50T/H zuru akpaka akọrọ ngwa agha ngwa agha 30T/H ájá nkụ arụnyere na Ordos, Inner Mongolia. Nke a set zuru akpaka akọrọ ngwa agha osisi na-eji Tower ụdị Ọdịdị, na-eme ka n'aka na osisi adịghị ogide ọtụtụ ohere. Mkpokọta ahụ ...